Ụdị ihe ọchị: anụ ụlọ na anụ ọhịa, obere na nnukwu, foto na nkọwa - Ụlọ, ụlọ - 2019
Ụdị ihe ndị a dị iche iche: ụlọ, ebe okpomọkụ, ọhịa na ọbụna efe efe. Foto na nkọwa nke ụdị niile
Ugbochi nke uwa biara n'oge Paleozoic. N'oge ahụ ha bụ ndị oge ochie nke ụwa.
Taa, anyị na-ekwu maka ụdị nchịkọta dị iche iche: ụlọ na ibi n'ime ọhịa, atụmatụ ha.
Ọ na-enyere ha aka ịmepụta ihe dị egwu - ndị mmadụ nwere ike ịnwụ ọsọ ọsọ na agha nuklia, idei mmiri na ihe egwu ọ bụla ọzọ. Ọbụna na-enweghị isi, ahụhụ nwere ike ịdị ndụ ruo ihe karịrị otu ọnwa.
Ọzọ banyere baleen
Ụdị ihe ọchị, foto na nkọwa
Ụmụ ahụhụ ndị a na-eme ka ha dum Òtù òtù Tarakanov. Ihe a na-ahụkarị nke ndị nnọchianya niile bụ otu oval body, tinye ya na isi triangular na ogologo antennae. Ya mere, ụdị ụdị ihe dị iche iche dị?
Green cockroach (banana).
Onye obibi nke oke ohia nke Florida, Ecuador na Cuba. Ọ dị iche na nchịkọta ụlọ na-acha akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ na agba na nnukwu nha. Ọtụtụ ndị na-azụ ha na terrarium dị ka anu ulo.
Echiche! A na-atụ aro ka ndị toro eto na ndị dị iche iche dị iche iche, dịka ụmụaka na-eto eto na-eri nri nna ha, na-adọgbu ha.
Ntucha dị iche iche nke osisi dị iche iche, nke foto ya dị ntakịrị ala, gbagoo n'ụzọ zuru oke site n'enyemaka nke nku uzo na-enwe ike igwu ala.
Ọchịchị Brown ma ọ bụ ahụhụ.
Ụmụ ahụhụ na-ekpuchi ahịhịa ndụ. Na ọdịdị, bi n'ime oke ọkụ nke Burma, India na Thailand.
Nnukwu ihe okike ruo 2 cm n'ogologo. All body integuments bụ acha chestnut agba. Mmadụ niile nwere nku uzo. N'ime ụmụ nwoke, ha dị ogologo, nwee ike ịmepụta onye ọbịa ahụ na mbara igwe. Na mgbakwunye, a na-eji nku a na-achagharị edo edo edo.
Ụmụ nwanyị adịghị mma, obere nku ha enweghị ihe mgbaru ọsọ, ha adịghịkwa ekwe ka ha bilie n'elu ala.
Esi na North America. Ugboro ụda na-agakarị. Ndị na-ekpuchighi anya buru ibu buru ibu, na-eru n'ogologo ihe karịrị 4 cm. A na-ahụ nku nke ọma, elytra dị mkpụmkpụ.
Ụmụ nwanyị nwere ahụ sara mbara. Ha na-ebu otu ụbọchị maka otu ụbọchị, wee zoo ya ma ọ bụ tinye ya na ogbugbo. N'elu ya, a na-ejikọta ya na nke ogwu.
A na-etolite ya na terrariums dị ka mma ma ọ bụ dị ka ihe oriri maka hedgehogs, agụba na spiders. Na ọdịdị, ndụ na South America. Nwoke nwere ike ibu ibu 3 cm n'ogologo, nwanyi - site na 2.5 cm. Ahụ bụ agba chestnut. N'elu nkpuchi nku bụ akụrụngwa na-acha ọkụ ọkụ nke na-etolite etu ogugu n'elu. N'olu olu, e nwere agba aja aja nchara.
Enweghị ọdịiche ndị ọzọ dị n'etiti ndị ikwu na marble cockroach. Dika ndi ozo, umu anu ndi di ndu na ndu n'elu ala, bu ihe omuma.
Madagascar na-eme mkpọtụ.
A na-ewu ewu ndị a na-ahụkarị n'ọtụtụ terrariums. Enweela nnukwu, ma e jiri ya tụnyere ụdị ndị ọzọ. Ogologo oge nke okenye nwoke rute 5-8 cm, nwanyị - 6-9 cm.
Enweghị nku ọbụna ndị tozuru okè. A na-ese ákwà na-acha uhie uhie ma ọ bụ chestnut.
N'agbanyeghi oke ha, ndi mmadu a di iche iche di iche iche di n'udo ma di elu egwu. N'ụbọchị, ha na-ezo n'ime ihe ndina nke akwụkwọ na ahịhịa, mgbe ha na-apụ n'abalị. Na ntakịrị mkparị nke ihe ize ndụ, ha na-amalite ike nwuo. A na - emepụta ụda ahụ site na spiracles dị n'akụkụ ahụ.
Nke a bụ nnukwu ọdịdị nke ụmụ ahụhụ na-ebi n'ime ọhịa na gburugburu ụwa.
Ọ bi n'oké ọhịa na steppes nile na Europe. Akụkụ ya na ya ọ bụghị nnukwu, ogologo oge dị ihe dị ka 1 cm. A na-ahụ ntụpọ ojii ojii na pronotum. Ndị okenye nwere ogologo nku kpuchiri site na nnukwu ọbọ.
Echiche! Ụdị a nwere akụkụ dị mma. Ndị nwoke na-arụsi ọrụ ike n'ụbọchị, ha na-ebi na osisi. Ndị inyom na-ebili n'abalị, na-ahọrọ ịnọ na ala, na-ezo na akwukwo nri.
Ọ na-ebi n'ime ọhịa-steppes na steppes nke Eurasia. Differs na obere size na nwekpe ederede unobtrusive. Ogologo ahu ya adighi karia 8 mm; ihe di iche iche bu agba agba na agba odo. Otu ojii arc a na-akpọ gafere site na pronotum.
N'ime ụdị a, a na-ahụ akara ngosi nke mmekọahụ. N'ihe banyere nwanyị, tegmina dị mkpụmkpụ, na-ekpuchi ọkara nke ahụ. N'ihe dị n'azụ, a na-agbanye n'ọchịchịrị. N'ihe banyere ụmụ nwoke, ọkpụkpọ ahụ dị ogologo ma kwụsị n'èzí. Ụjọ ojii adịghị adị.
Stepnyaki na-ebi naanị otu oge ọkụ. N'oge oyi, ha na-akwatu ụlọ mkpọrọ, ha onwe ha na-alakwa n'iyi. Site n'oge okpomọkụ nke ogwu na-egosi oke, nke ghọrọ okenye site na June.
Achịkọ anụ ọhịa na-emekarị.
Nnukwu ndị si Central America. Na ogologo nwere ike ibu ibu 6-8 cm. Uhie na elytra nwere agba aja aja na-acha uhie uhie na ogwe ojii na ntụ ojii na protinum.
Umu omnivorous ndi bi n'ime akwukwo nri. N'oge agha ahụ, onye iro ahụ na-ahapụ ihe nzuzo na-esi ike nke na-atụ egwu.
Ndị a na-agba gburugburu ụmụ ahụhụ ndị a dị ọtụtụ. Dịka ọmụmaatụ, akụkọ banyere onye na-acha ọcha na-acha ọcha. Nke a abụghị anụ ọhịa! N'eziokwu, njikọta ọkụ nwere ike ịpụta na mkpịsị na-eto eto ndị na-agbazi.
Echiche ọzọ na-ewu ewu na-ewu ewu bụ ihe nro na-egbu egbu. Enweghi ihe di n'onu! Ma ọtụtụ iche na-ewepụta ihe nzuzo na-esi ísì ụtọ nke na-emeri ndị iro.
Ma ufe ufe bu eziokwu zuru oke! Banana na nnukwu Hispanics nwere ike ofufe. Ha ruru 20 cm n'ogologo ma jiri nwayọọ na-agagharị na mbara igwe.
Ụdị ụdị anụ ụlọ, nwa na-acha uhie uhie, nke na-ebi n'ime ụlọ ahụ, na-akpata nsogbu kasịnụ nye mmadụ. Ọ bụghị nanị na ha na-akwakọba ihe ndị ahụ, na-ahapụ ihe omume ha dị mkpa, ma na-ebu ọtụtụ ọrịa na-efe efe. E nwekwara ikpe mgbe ha rutere na ntị ma ọ bụ imi nke mmadụ na ọbụna na-ada ya.
Ya mere, mgbe ị na-achọ ndị ọbịa a na-akpọghị n'ụlọ, ị ga-ekpochapụ ha site n'aka ọgwụ ma ọ bụ ndiife.
N'okpuru ebe a, anyị na-enye ndị dị oké ọnụ ahịa na ndị a pụrụ ịdabere na ya:
ndị na-ekpo ọkụ na ndị na-asọ oyi: Raptor, Ụlọ Dị Ọcha, Ọgwụ, Onye Mmebi;
afia: Egu, Forsyth;
Onye na-ahụtụbeghị, nwere ike ịmatakwu anụ ụlọ - foto dị n'okpuru:
Ọ na-achọpụta na ọ bụghị nanị na ime ọpụpụ nwere ike imebi ụmụ mmadụ! E nwere ụdị ihe eji eme ihe, nke a na-eji dị ka nri anụ ụlọ, na ụdị anụ ndị na-adọrọ mmasị maka terrarium. Anyị na-ele anya ma ndị nnọchiteanya abụọ na obere ncha, foto nke ụdị dị iche iche dị n'elu.
Olee otú ịgha mkpụrụ ọkụ ọkụ? Nhọrọ, ịjụ na nkwadebe nke osisi maka akuku, mgbe ịkụ ihe, ịgha mkpụrụ na ilekọta oge ịse
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Ụdị ihe ndị a dị iche iche: ụlọ, ebe okpomọkụ, ọhịa na ọbụna efe efe. Foto na nkọwa nke ụdị niile